झापाका २३ कोरोना सङ्क्रमित धरान ल्याई पुर्‍याईयो
झापाका २३ कोरोना सङ्क्रमित धरान ल्याई पुर्‍याईयो सङ्क्रमितलाई कोभिड अस्पतालमा राखिएन , आइसोलेसनमा राखियो
धरान : झापाको कचनकवल गाउँपालिकाका कोरोना सङ्क्रमित बिरामीलाई बिहीबार साँझ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वार्डमा ल्याई पुर्‍याएको छ ।
उनीहरूलाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको विराटनगर स्थित कोभिड १९ अस्पतालमा बेड अभाव भएको कारण धरानमा तयारी गरिएको १ सय बेड क्षमताको कोभिड अस्पतालमा भर्नाका लागि पठाएको हो । तर उनीहरूलाई कोभिड १९ अस्पतालमा नराखी पेईङ वार्डमा तयार गरिएको आइसोलेसन वार्डमा राखिएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटाले जानकारी दिएका छन् ।
आइसोलेसनमा अहिले २४ जना कोरोना पुष्टि भईसकेका र अरू थप १२ जना गरी ३६ जना रहेको प्रवक्ता डा. सापकोटाले बताए । यसरी एउटै वडामा सङ्क्रमित र आशङ्का गरिएका बिरामी राख्नु जोखिम भएन र भन्ने प्रश्नमा उनले भने अहिले पेईङ वार्डको तलामाथि पनि आइसोलेसन बनाएकोले दुरी कायम गरिएको दाबी गरे ।
१ सय बेड क्षमताको अस्पतालमा किन बिरामी भर्ना गरिएन ?
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हाता भित्र रहेको कोभिड १९ अस्पतालमा बिरामी नराख्नुको कारण कुनै पनि तयारी नभएको बताइएको छ ।
नवनियुक्त उपकुलपतिले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री सेरधन राईलाई अहिले तयारी गरिएको कोभिड अस्पतालमा अरू थप गरी ५ सय बेड सम्मको अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिएका थिए । तर औपचारिकरुपमा सञ्चालन सुरुवात भएको घोषणा भएको यत्तिका दिन सम्म एक जना बिरामी राख्ने सम्मको तयारी नगरिएको स्रोतले बताएको छ ।
अहिले सम्म सो १ सय बेडको अस्पतालमा नत बिरामीलाई राख्ने बेड तयारी भएको छ न बिरामीका लागि प्रयोग हुने भेन्टिलेटर नै जोडिएको छ । केही सामान जोडिएको भए पनि काम लाग्ने अवस्थाको नभएको बताइएको छ ।
यसरी १ सय जना बिरामीलाई भर्ना गरेर उपचार गर्न सक्ने क्षमताको अस्पताल तयारी भयो भनेर प्रतिष्ठान प्रशासनले कामै नगरेको बताइएको छ । कोरोना सङ्क्रमित दिनानुदिन बढी रहेको बेलामा यसबारेमा प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाई छ ।
धरानमा फेरि १२ जनामा कोरोना सङ .....
धरानमा लकडाउन अत्यन्तै कडा हुन .....
खानेपानीको पाइप तोडफोडको आरोपम .....
कोसी अस्पतालमा दुई जना कोरोना .....
२४ घन्टामा थप ३८१ जनामा कोरोना .....
सनराइज बैंकमा कर्मचारी मृत फेल .....
धरान-१३ मा आगलागी, २ लाख बढी क .....
सुनसरीमा निषेधित क्षेत्र घोषणा .....
धरानमा फेरि १२ जनामा कोरोना सङ्क्रम ...